Lamadegaan - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan deegaanada "Lamadegaanka" ah. Qoraalo kale fiiri Saxare.
Haku khaldin khashinka noolaha ee "Saxaro".
Lamadegaan, Saxare (ingiriis: desert; carabi: صحراء) waa deegaan aan lahayn biyo iyo dhir; isla markaana leh heerkul aad u kulul wakhtiga maalintii iyo qaboow daran habeenkii. Lamadegaanku waa meelo aad ugu yar yahay roobku taasi oo keentay biyo la'aan daran iyo abaaro joogto ah. In kastoo ay ku kala duwan yihiin bixitaanka dhirtu aad ayay ugu yar tahay ama kamaba jirto ayaa la odhan karaa deegaanada saxaraha ah; sababta ugu weeynina waa biyo la'aanta ka jirta lamadegaanka. Af Soomaali ahaan ereyga "lamadegaan" (Lama-Degaan) wuxuu ka turjumayaa deegaano aan la degi karin ama nolosha dadka iyo xoolaha taageeri karin. Ereyga "Saxare" waxaa laga soo xigtay luuqada Carabiga, waana la micno ereyga Lamadegaan. In ku dhow hal meel sadex meelood (1/3) oo ah oogada dhulka ayaa ah lamadegaan ama saxare-lamood (badh-lamadegaan; "semi desert"). Dhulkaasi waxaa ka mid ah xataa cidhifyada aduunka (Cidhifka Waqooyi iyo Cidhifka Koonfur) halkaasi oo leh roob aad u yar, mararka qaarna looguba yeedho "Lamadegaanka Qaboow". Saxaraha waxaa lagu kala soocaa ayadoo la fiirinayo xadiga roob ee meeshaas ka da'a, heerkulka ay gaadho, waxyaabaha sababey saxaranimada deegaankaasi iyo meesha uu dhaco dhulkaasi juquraafi ahaan. Carada saxaraha inta ugu badan waa mid bataax ah oo ka kooban budo iyo boodh, sababtoo ah marka heerkul aad u sareeya oo kuleyl badan iyo hawo awood badani isku hesho carada ayaa waxay keentaa in burubur toos ah ku dhaco dhismaha caradaasi, taasi oo inta badan ka dhigta mid bataax iyo boodh ka samaysan.
Si kastaba ha ahaatee, deegaanada saxaraha ahi inkastoo biyo la'aan iyo dhir yari ka jirto waxay qani ku yihiin macdano farabadan oo laga helo oogada iyo hoosta dhulkaasi. Macdanta laga helo lamadegaanka waxaa ka mid ah dahabka, luulka, [[shidaal]ka, saliida qeeydhiin, gaaska dabiiciga ah, birta, naxaasta iyo macdano kale oo badan kuwaasi oo qiimo sare ku leh suuqa caalamka.
Dabeylaha boodhka wata oo ka dhacaya xero ciidan dalka Ciraaq.
Cimilada sanadle ee dhulka saxaraha ahi weey kala duwan tahay; meelaha qaar waxay caan ku yihiin heerkul aad u sareeya wakhtiyada gu'ga iyo xagaaga, qaboow saa'id ah iyo dabeylo boodh iyo duufaano wata xiliga jiilaalka ah. Intaasi waxaa dheer oo gobolo badan oo saxare ahi caan ku yihiin duufaan xoog badan oo wadata boodh iyo bus badan taasi oo dhacda xili ka mid ah sanadka. Dhamaan shanta qaaradood ee dunidu waxaa laga helaa deegaano kala duwan oo lamadegaan ah. Qaarada Afrika tusaale ahaan waxay leedahay labo ka mid ah lamadegaanada ugu waaweyn aduunka; kuwaasi oo kala ah Lamadegaanka Saxara ee dhaca waqooyiga qaarada iyo Lamadegaanka Kalahari oo laga helo wadanada koonfurta Afrika. Waxaa intaas dheer meelo badan ooy ka mid tahay Bariga Afrika oo lagu magacaabo ineey yihiin "Saxaro-lamood", ama ah wadano imika soo noqonaya lamadegaan maadaama caradu nabaad guureyso sidoo kale dhirtu ka tafiir go'eeyso deegaandaasi.
Lamadegaanada ugu waaweyn dunida
Tobanka Lamadegaan ee ugu Weyn Dunida
1 Lamadegaanka Antaraktika (Cidhifka Koonfureed) 14,200,000 5,500,000
2 Lamadegaanka Araktika (Cidhifka Waqooyi) 13,900,000 5,400,000
3 Lamadegaanka Saxara (Afrika) 9,100,000 3,500,000
4 Lamadegaanka Carabta (Bariga Dhexe) 2,600,000 1,000,000
5 Lamadegaanka Gobi (Aasiya) 1,300,000 500,000
6 Lamadegaanka Batagoniya (Koonfurta Ameerika) 670,000 260,000
7 Lamadegaanka Fiktooriya (Ustareeliya) 647,000 250,000
8 Lamadegaanka Kalahari (Afrika) 570,000 220,000
9 Lamadegaanka Baysin (Waqooyiga Ameerika) 490,000 190,000
10 Lamadegaanka Suuriya (Bariga Dhexe) 490,000 190,000
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamadegaan&oldid=147009"